» सेतो लुगामा टाटो लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? निचोरेको कागतीले गर्छ यस्तो कमाल
सेतो लुगामा टाटो लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? निचोरेको कागतीले गर्छ यस्तो कमाल
१८ पुष २०७६, शुक्रबार ०६:४१
हाम्रो घरमा सजिलै पाइने चिज हो कागती । निकै स्वादिष्ट हुने कागती हाम्रो स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ । यसको सेबनले चियादेखि अनुहार चम्काउनसम्म प्रयोग हुन्छ । कागतीले नुहाँउदा चाँया पर्ने समस्या हराउछ ।
यस्तै कागती जस्तै निचोरेको कागतीको पनि धेरै फाइदा छन् । धेरैले निचोरेको कागतीको प्रयोग गर्दैनन् । तर निचोरेको कागतीको धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ । निचोरेको कागतीले भाडा डढेको दाग मेटाउन सकिन्छ । खाना बनाउदा भाँडा डढेर कालो भएको छ भने तातो पानीमा निचोरेको कागतीलाई केही बेर डुबाएर रगडेमा कालो जान्छ ।
त्यस्तै निचोरेको कागतीले हातको चिल्लो हटाउन पनि सहयोग गर्छ । हातमा लागेको चिल्लो हटाउन कागती पानीले मद्धत गर्ने गर्छ । कागतीमा हुने एसिडयुक्त तत्वले नङको फोहर फालेर चमक ल्याउछ ।
निचोरेको कागतीले कपडामा चमक पनि ल्याउछ । सेतो लुगामा कालो लागेर हैरान हुनुहुन्छ भने फालिएको कागतीलाई पानीमा निचोरेर लुगालाई १५ मिनेट छोडिदिनुहोस । त्यसपछी लुगालाई साबुन पानीले धुनुहोस । तपाईको लुगामा चमक आउछ ।
निचोरेर फालेका कागती घरमा राख्दा अनावश्यक झिंगा पनि लाग्दैन । निचोरेर फालेको कागतीले फ्रिजको गन्ध पनि कम गराउछ । निचरेको कागती वा वोक्रालाई कुनै सेतो र सफा कपडामा राखेर कुनामा फालिदिनुहोस । दुई तीन घन्टासम्म कागतीको बासनले कोठा नै सुगन्धित हुन्छ ।